China Mechanical mkpọchi Manufacturers - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > Mechanical mkpọchi
Yli na-emepụta mkpọchi igwe eletrik na ọkọlọtọ ọkọlọtọ Europe. Enwere ike ịrụ ọrụ ya site na akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụrụ na mberede.
Yli eletriki igwe eletriki eletrik nwere ike oriri ala, enwere ike iji ya mee ihe na -40â ƒ ƒ na 60â „. Enwere ike iji mkpọchi igwe eji eji mkpọchi eletriki rụọ ọrụ, Yli eletriki elektrọnik Yli nwere ike iji naanị ya, ọ nwere ike belata ọnụahịa gị na ịrụ ọrụ nke ọma.
YLI mkpọchi akwadoro ika maka ọrụ ijikwa oru ngo na Withrụ ọrụ dị mma, dịkwa mma ma kwụsie ike.
Latch nwụrụ anwụ nwere cylinder na mkpịsị aka aka dabara adaba maka ọnụ ụzọ igwe
Latch nwụrụ anwụ nwere cylinder na mkpịsị aka aka dabara adaba maka ọnụ ụzọ osisi
Ọnụ ụzọ Mkpọchi Mechanical American Standard Mechanical
YS-305US n'ibu mkpọchi bụ ihe niile-metal Ọdịdị na mgbochi-prying ọrụ, onwem na mkpọchi cylinder, ọ nwere ike nweta dual nzube nke electric akara n'oge nkịtị na ntuziaka ọrụ na mberede.
American Standard Mechanical mkpọchi ọnụ ụzọ osisi
YS-306US n'ibu mkpọchi bụ ihe niile-metal Ọdịdị na mgbochi-prying ọrụ, onwem na mkpọchi cylinder, ọ nwere ike nweta dual nzube nke electric akara n'oge nkịtị na ntuziaka ọrụ na mberede. Na-egbo mkpa nke ọnụ ụzọ osisi na ihe ndị ọzọ.
Ọkọlọtọ European Mechanical Lock nwere cylinder
YS-307 n'ibu mkpọchi bụ niile-metal Ọdịdị na mgbochi-prying ọrụ, onwem na mkpọchi cylinder, ọ nwere ike nweta dual nzube nke electric akara n'oge nkịtị na ntuziaka ọrụ na mberede. Na-egbo mkpa nke ọnụ ụzọ osisi na ihe ndị ọzọ.
Mkpọchi Mechanical European ọkọlọtọ nwere ọnụ ụzọ osisi cylinder
YS-308A n'ibu mkpọchi bụ niile-metal Ọdịdị na mgbochi prying ọrụ, onwem na mkpọchi cylinder.